Maroodi arrin lama filaan ah ka sameeyay goob ay ka socotay munaasabad diimeed - BBC News Somali
Maroodi arrin lama filaan ah ka sameeyay goob ay ka socotay munaasabad diimeed
Image caption Maroodiga ayaa mar qura si aan la xakameyn karin ugu dhex orday dadka
Ugu yaraan 17 ruux ayaa ku dhaawacantay munaasabad diimeed oo ka socotay magaalada Kotte ee dalka Sri Lanka, ka dib markii ay si lama filaan ah amar diiddo u sameeyeen labo maroodi oo loo adeegsanayay munaasabaddaas.
Warbaahinta maxalliga ah ayaa shaacisay muuqaal laga arkayo mid kamid ah maroodiyaasha oo si aan la xakameyn karin ugu dhex ordaya dadkii munaasabad diimeedka isugu yimid, waxaana ka dhalatay waxyeello baahsan oo soo gaartay dadka.
Maroodigan oo u muuqday inuu yahay mid carbisan, sharraxaadna dusha laga soo saaray ayaa isla markiiba ku sii cararay waddada ay ka buuxeen dadweynaha ka qeyb galay xafladdaas, iyadoo la arkayay ninkii dusha ka saarnaa oo ka dhacaya, isla markaana si dirqi ah uga badbaaday inuu ku tunto.
Dhammaan dadkii soo xaadiray munaasabadda ayaa naftooda la cararay, waxaana ay xaaladdu mar qura isku baddashay mid musiibo ah.
Falkan oo ay si weyn u hadal hayaan warbaahinta caalamka ayaa ka dhacay xaflad diimeed sanadle ah oo ay sameystaan dadka budiisteyaasha ah ee heysta diinta Budha.
Carruurta Sri Lanka oo si sharcidarro ah looga ganacsaday
Sawirro: weerarradii lagu le'day ee ka dhacay Sri Lanka
Image caption Dadkii goobta ku sugnaa ayaa naftooda la baxsaday
Dadkii ku dhaawacmay goobtaas, oo qaarkood uu dhiig ka socday ayaa lagu qaaday gawaarida gurmadka deg-degga ah ee ambalaasta, sida ka muuqata muuqaalka lasii daayay.
Ciidamada booliska ayaa ka qeyb qaatay daad gureynta dhaawacyada.
Munaasabad diimeedkaas oo ka dhacday meel u dhow caasimadda wadanka Sri Lanka ayaa waxaa markii hore furay wasiir ka tirsan dowladda, kaasoo aan ka mid ahayd dadka dhaawacmay.
Sida ay wararku sheegayaan, markii uu orday maroodiga hore, dadkiina ay yaaceen ayuu maroodi kale isla sidaas oo kale u orday.
Saraakiisha Isbitaallada magaalada ayaa sheegay in lasoo gaarsiiyay ugu yaraan 17 qof oo dhaawacyo kala duwan qaba, kuwaaso ay ku jiraan 2 carruur ah.
Ilaa hadda lama oga sababta keentay in maroodiyaasha carbisnaa ay baxsadaan, amarkana qaadan waayaan.
Image caption Maroodi aad caato u ah
Waa markii labaad oo dalka Sri lanka laga soo tabiyo dhacdo la xiriirta Maroodi.
Bishii lasoo dhaafay waxaa soo baxay sawirro muujinaya Maroodi dhadig ah oo 70 jir ah, aadna caato ah u ah, oo lagu khasbay inay muddo 10 habeen ah ka qeyb gasho xaldlad diimeed sanadkiiba mar la qabto.
Ururrada u dooda xuquuqda xayawaanka, gaar ahaan kuwa maroodiyaasha ayaa cambaareeyay arrintaas, inkastoo mas'uuliyiinta maamulayay munaasabaddaas ay sheegeen inay ka taxadaraan xannaanada xayawaanka.